Nepal Samaya | यी युट्युबर, जो अरुको निजी जीवनमा घुस्दै चरित्रहत्या गरिरहेछन्
अनिल यादव | काठमाडौं, आइतबार, साउन २४, २०७८
‘कोठाभित्र रङ्गेहात भेटिए स्मृति र साजन, पेटको बच्चा फालेको हो/होइन? भोजराजले खोजीखोजी यसरी भेटे’
युट्युबर भोजराज थापालाई पछ्याउनुहुन्छ भने पक्कै हेरेको हुनुपर्छ, गत साउन १६ गते उनको च्यानल ‘मेचीकाली खबर’मा अपलोड भएको एउटा भिडियो, जसको शीर्षक यही थियो।
लाखौँ भ्युज पाएको यो भिडियो युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर ६ सम्म उक्लिएको थियो। राम्रै भ्युज पाइरहेको यो भिडियो भोजराजले अपलोड गरेको भोलिपल्टै हटाए। तैपनि टिकटक, फेसबुकदेखि अन्य युट्युब च्यानलमा भने अझै पनि छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्, यो भिडियो र यसका क्लिपहरू।
अपलोड गरेको २४ घण्टा नपुग्दै उनी भिडियो हटाउन किन बाध्य भए? अलिकति अनुमान त शीर्षक पढेरै पनि गर्न सकिन्छ। तर यसको अन्तर्य बुझ्न भने भिडियो अपलोड भएको दुई दिनअघि फर्कनुपर्छ।
साउन १४ गते भोजराजले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो राखेका छन्, जसको शीर्षक छ– ‘गोविन्दकी १९ वर्षे श्रीमती गर्भपतन गरी बेपत्ता, १७ वर्षे प्रेमीसँग भागेपछि रुँदै श्रीमान् मिडियामा।’
लमजुङका गोविन्द थापाले दुई वर्षअघि आफू २७ वर्षको हुँदा १७ वर्षीया स्मृतिसँग बिहे गरेका थिए। उनीहरूबीच खटपट भइरहेको थियो। स्मृतिले बताएअनुसार गोविन्द उनलाई दिनहुँ यातना दिन्थे। यही क्रममा स्मृतिको सम्बन्ध स्थानीय १७ वर्षिय साजन बसेलसँग झाँगिन सुरु भएको थियो।
त्यस्तैमा केही दिनअघि गोविन्दसँग खटपट भएपछि घरबाट रिसाएर निस्किएकी थिइन्, स्मृति। गर्भवती पनि थिइन्। तर, गोविन्दले स्मृतिलाई घर फर्काउन कुनै चासो राखेनन्।
स्मृतिले बताएअनुसार फोन गर्दा उल्टै ‘घर आउनु पर्दैन’ भनेर थर्काएका थिए। त्यसपछि स्मृति साजनको शरणमा पुगिन्। दुवै गाउँबाट भागे। जब गोविन्दले यो खबर पाए, त्यसपछि स्मृतिको खोजीमा जुटेनन्, बरु युट्युबर भोजराजको शरणमा पुगे।
माथिको शीर्षक त्यसपछि भोजराजले गोविन्दको 'इन्टरभ्यु' लिएर हालेको बेलाको हो। जहाँ उनी सगर्व भन्छन्, ‘श्रीमती बेपत्ता भएदेखि नै निरन्तर खोजी कार्यमा भौ‌तारिँदै गर्दा गोविन्द यतिबेला सहयोगका लागि हामीमाझ आइपुगेका छन्। दर्शकवृन्द, भिडियोको स्क्रिनमा देखिएका स्मृति थापा र साजन बसेललाई तपाईंले कतै देख्नहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फोन नम्बर भिडियोको स्क्रिनमा छ, सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।’
उनको प्रस्तुति सुन्दा लाग्छ, मानौँ कि उनी यो देशको ‘न्यायालय’ नै हुन्। उनमा पीडितको गोपनियताको कुनै परवाह नै छैन। भर्खर १७ र १९ वर्ष पुगेका किशोर/किशोरीलाई ‘अपराधी’ करार गर्दै उनीहरूको तस्बिर नै भिडियोमा राखेका छन् भोजराजले। अनि, गोविन्द र स्मृतिको निजी फोन रेकर्ड कार्यक्रममै सार्वजनिक गरिदिन्छन्।
भोजराजले बनाएको यही भिडियो देखेर चितवनबाट एकजना प्रत्यक्षदर्शीले आफूले स्मृति र साजनलाई देखेको भन्दै फोन गर्छन्। त्यसपछि क्यामेराम्यान र गोविन्दलाई साथमा लिएर उनी चितवन पुग्छन्। पसलपसलमा फोटो देखाउँछन्, र सोध्न थाल्छन्, ‘यिनीहरूलाई देख्नुभएको छ?’, ‘कोही भागेर आएका छन् यहाँ?’
यसरी खोज्दैखोज्दै उनी स्मृति र साजन लुकेर बसेको घरसम्म पुग्छन्। र, क्यामेराअघि उभिएर चिच्याउन थाल्छन्, ‘हामीले स्मृति र साजनलाई कोठामा रङ्गेहात पक्राउ गरेका छौँ।’ यसरी भन्छन् कि, मानौँ उनी यौन अड्डामा छापा मार्न जाने प्रहरी हुन् र त्यहाँबाट यौनजोडी पक्राउ गरिरहेका छन्।
उनको प्रस्तुति सुन्दा लाग्छ, मानौँ कि उनी यो देशको ‘न्यायालय’ नै हुन्। उनमा पीडितको गोपनियताको कुनै परवाह नै छैन, भर्खर १७ र १९ वर्ष पुगेका किशोर/किशोरीलाई ‘अपराधी’ करार गर्दै उनीहरूको तस्बिर नै भिडियोमा राखेका छन् भोजराजले।
कोठाभित्र छिरेपछि गोविन्दको पक्ष लिएर एकोहोरो स्मृति र साजनलाई प्रश्न गर्न थाल्छन्, अदालतमा ‘बयान’ लिएझैँ। कोठाभित्र छिर्नासाथ सुरुमा गोविन्दले साजनलाई पिट्छन्। भोजराजले सम्झाउँछन्, ‘हात नहाल्नू?’
साजनले शरीरमा टिसर्ट लाएका हुँदैनन्। भोजराजको ‘बयान’को सुरुवात नै साजनबाट हुन्छ। भन्छन्, ‘ल भाइ के छ त हालखबर? नाङ्गै बसेको? कपडा लगाऊ, कपडा।’
साजनले कपडा लाउनासाथ उनी ‘बयान’ लिन सुरु गर्छन्, ‘यति सानै उमेरमा अर्काको बूढी भगाउने हो त भाइ? तिमीहरूले त मलाई सुत्नै दिएनौँ त। कहिले कता गा’छ, कहिले कता।’
यसरी उनीहरूलाई खोज्दाखोज्दा आफू थाकेको आशय प्रकट गर्छन् भोजराज। स्मृति श्रीमानले आफूलाई सधैँ ‘निस्केर जाँ’ भन्ने र 'टर्चर' दिने गरेको बताइरहन्छिन्। तर भोजराज सुन्न चाहँदैनन्। उल्टै स्मृति र साजनलाई किन झुट बोलेको भन्दै एकोहोरो पेलिरहन्छन्। छेउमा रहेका गोविन्द त हातै हाल्न पुग्छन्।
‘बयान’का क्रममा १९ वर्षिया युवती र १७ वर्षीय युवकलाई ‘अपराधी’ सावित गर्न अनेक प्रयास गरिरहन्छन्, भोजराज। अनेक पात्रहरुसँग फोन लगाएर कुराकानी गर्नसम्म भ्याउँछन्। भिडियो हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, उनी एकोहोरो गोविन्दको पक्ष लिइरहेका छन्। कतिले त युट्युबको प्रतिक्रियामै भोजराजलाई प्रश्न गरेका छन्,‘यसो गरेबापत गोविन्दबाट कति पैसा लिइस्?’
बयान लिइरहेकै बेला चितवन प्रहरी कोठासम्मै आइपुग्छ। र, गोविन्द, स्मृति र साजन तीनै जनालाई पक्राउ गरेर लान्छ। भोजराजले अपलोड गरेको भिडियोमा यी सबै दृश्य देखिन्छ। फेरि पनि दोहोर्‍याऔँ, जसको शीर्षक थियो– ‘कोठाभित्र रङ्गेहात भेटिए स्मृति र साजन, पेटको बच्चा फालेको हो/होइन? भोजराजले खोजीखोजी यसरी भेटे।’
भोजराजको युट्युब च्यानल ‘मेचीकाली खबर’मा १२ लाखभन्दा बढी 'सब्सक्राइबर' छन्। एउटै भिडियो १५ लाखभन्दा बढीले हेरेका छन्। देशविदेशमा परिचित युट्युबर हुन्, भोजराज। र, यस्तो लाग्छ, कसैको निजी जीवनमा घुस्दै चरित्र हत्या गर्नु उनको युट्युब च्यानलकाे खासियत हो। गोविन्द प्रकरण त त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो।
उनको अर्को विशेषता पनि छ, ‘सनसनीपूर्ण’ शीर्षक राखेर अरुको निजी सम्बन्धमाथि भिडियो बनाउनु, तर आफैंलाई जोखिम भएपछि तत्काल हटाइहाल्नु। सुरुवाती भ्युजबाट डलर पनि झरिहाल्ने, पछि च्यानलमा हेर्दा नदेखिने पनि।
स्मृति–साजनलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको भिडियो भोलिपल्टै हटाउनुको कारणबारे हामीले भोजराजलाई सोधेका थियौँ। जवाफमा उनी अड्किँदै बोलेका थिए, ‘मन लागेर हटाएको।’
तर, पछि बुझ्दै जाँदा आफू पनि फस्ने डरले उनले त्यो भिडियो हटाएका रहेछन्। उनले पक्ष लिएको गोविन्दलाई नै प्रहरीले मुद्दा चलाउने भएपछि उनी डराएका रहेछन्। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, युट्युबमा चर्चा भएका यी तीन पात्र अहिले कहाँ छन्?
जिल्ला प्रहरी कार्यलय लमजुङमा बुझ्दा तीनै जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको पाइयो। कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता भइसकेकाे छ। प्रहरी निरीक्षक जनक रेग्मीले दिएको जानकारी अनुसार उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा राखेर बालविवाह र जबर्जस्ती करणी गरी दुई अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ।
त्यस्तै १७ वर्षीय साजनलाई भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखेर जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको रहेछ।
‘जबर्जस्ती करणी कसरी?’ हामीलाई इन्सपेक्टर रेग्मीलाई यसबारे विस्तृतमा बुझ्न खोज्दा जवाफमा उनले उमेर नपुगेका कारण त्यसो गरिएको बताए। ‘१८ वर्ष मुनिकाले सहमतिमै यौन सम्पर्क राखे पनि त्यो जबर्जस्ती करणी नै हुने भयो। उनीहरूको कास्कीमा सम्बन्ध भएको देखियो, त्यसैले कास्की प्रहरीमा राखेर मुद्दा चलाइएको हो,’ उनले भने।
त्यस्तै स्मृतिलाई पनि प्रहरीले बालविवाह र गर्भपतन गरी दुई अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ। तर, अदालतले जिम्मा जमानीमा छाडेका कारण उनी भने प्रहरी हिरासतमा छैनन्।
भोजराजले भिडियोमा गोविन्दलाई ‘भगवान्’ बनाएर प्रकट गरिरहेका थिए। तर प्रहरीले उनीमाथि नै मुद्दा चलाइदिएपछि उनको मथिंगल हल्लिएको पाइयो। त्यसपछि उनले पुरानो भिडियो हटाए। र, नयाँ भिडियो अपलोड गरे, जसको शीर्षक छ, ‘यही हो स्मृति, गोविन्द र साजनको खास वास्तविकता, बालबिवाह नै यो घटनाको कारण।’
यसअघिसम्म उनी यो घटनाको दोषी युवतीलाई मात्रै देखिरहेका थिए, तर आफूले पक्ष लिएको व्यक्तिलाई नै प्रहरीले मुद्दा चलाइदिएपछि उनले पनि खास दोष ‘बालविवाह’मै देखे। तर, यही भिडियोमा पनि उनले स्मृतिका बुबासँग फोनमा कुराकानी गरेका छन्। र, स्मृतिले गोविन्दसँग बालविवाह नगरेर राजीखुशी बिहे गरेको पुष्टि गर्न खोजेका छन्। उनको नियतबाटै यसबाट झन् प्रष्ट हुन्छ।
फेरि पनि भनौँ, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, भोजराजले आफ्नो अधिकांश भिडियोमा कि त कतै भएका अपराधका घटनालाई अतिरञ्जित बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्, कि त कोही परिवार या व्यक्तिको निजी जीवनमा घुसेर चरित्रहत्या।
हामीले फोनमार्फत उनलाई यही प्रश्न गर्‍यौँ,‘तपाईलाई अरूको व्यक्तिगत जीवनमा अलि बढी नै प्रवेश गरेजस्तो, चरित्रहत्या नै गरेजस्तो महसुस भएको छैन?’
जवाफमा उनी एकछिन अकमकिए र भने, ‘म कसैको व्यक्तिगत जीवनमा पसेको होइन। मलाई बोलाएपछि मात्रै गएको हो।’ त्यसपछि उनले थप जवाफ दिन चाहेनन्, फोन काटे।
युट्युब भिडियो र भ्युजका लागि भोजराज कतिसम्म गिर्न तयार हुन्छन्, थप केही दृष्टान्त पनि हेरौँ।
केही साताअघि चितवनस्थित ब्रह्मास्थानी सामुदायिक वनमा सुजिता भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। पछि यो घटनामा प्रहरीले आफ्नै ठूलोबुबाका छोरासँगको प्रेम सम्बन्धका कारण आत्महत्या गरेको ठहर त गर्‍यो, तर जतिबेला सुजिताको शव भेटिएको थियो, त्यतिबेला एक युट्युबरमाथि चितवनवासी घटनास्थलमै खनिएको भिडियो भाइरल भएको थियो। युट्युबरलाई लखेटिएको खबरले चौतर्फी चर्चा पाएको थियो।
सुजिता बेपत्ता भएका बेला भोजराजले उनकी आमासँग इन्टरभ्यु लिएका थिए। स्थानीयको आरोप के थियो भने त्यतिबेला भोजराजले सुजिताकी आमालाई ‘यसरी रुनुस् न’ भनेर जबर्जस्ती रुन लगाएको आरोप थियो।
ती युट्युबर थिए, यिनै भोजराज थापा। सुजिता बेपत्ता भएका बेला भोजराजले उनकी आमासँग इन्टरभ्यु लिएका थिए। अन्तर्वार्ताका क्रममा त्यतिबेला भोजराजले सुजिताकी आमालाई ‘यसरी रुनुस् न’ भनेर जबर्जस्ती रुन लगाएको स्थानीयको आरोप थियो।
अरुको भावना बेचेर युट्युबबाट पैसा कमाउन हदैसम्म गिरेको उनलाई आरोप थियो। यसले भोजराजलाई निकै चिन्तित बनायो। त्यसपछि यो आरोप चिरियोस्, आफ्नो छवि नधमिलियोस् भनेर उनी मध्यरात जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन पुगेकी सुजिताकी आमाको शरणमा पुग्न बाध्य भएका थिए। त्यहाँ उनले सुजिताकी आमालाई 'मलाई जबर्जस्ती रुन लगाइएको होइन' भन्न लगाएका थिए। त्यही कुराको भिडियो पछि उनले युट्युबमा राखेका थिए।
यति मात्रै कहाँ हो र! चितवनमा यसअघि चर्चामा आएको सविता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा पनि भोजराजले बनाएका भिडियो कन्टेन्ट पत्रकार आचारसंहिता विपरीत थियो। अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलिरहेको थियो तर यता युट्युबरहरु आफैँ न्यायाधीश बनेर ‘हत्या’ घोषणा गरिरहेका थिए। युट्युबमा नजर-२ मा हामीले यसबारे विस्तृत सामग्री तयार गरेका थियौँ।
भोजराजले त्यतिबेला सविता प्रकरणमाथि नै तीनवटा भिडियो बनाएका थिए। केही त युट्युब ट्रेन्डिङमै पुगेका थिए। उनको च्यानलमा अहिले पनि हेर्न मिल्ने भिडियोको शीर्षक छ, ‘सविता भण्डारी मृत्यु प्रकरणको नालीबेली, के ससुराकै कारण यस्तो भएको हो? किन मिलेन अझै न्याय?’
उनको यो भिडियोको सुरु नै ससुराले बुहारीको काखमा बसेर गरेको दुर्व्यवहारको दृश्य देखाएर भएको छ। एकपटक होइन, उनले बारम्बार, दोर्‍याइतेर्‍याइ, जुम गरी–गरी, त्यो दृश्य देखाएका छन्, ताकि उनको भिडियोप्रति दर्शकको ध्यान रहिरहोस्।
सोही भिडियोमा भोजराजले सविताकी बहिनी सजनी र आमालाई सँगै राखेर अन्तर्वार्ता पनि लिएका छन्। जहाँ सजनीले आफूसँग दिदीलाई ससुराले शरीरभित्रै हात लगेर दुर्व्यवहार गरेको भिडियो पनि रहेको बताएकी छन्। तर, कुनै पनि भिडियोमा सामाजिक सञ्जालमा बाहिर ल्याउने मनशाय नभएकोसम्म उनले स्पष्ट पारेकी छन्। ‘अहिले भाइरल भएको भिडियो पनि मैले लिक गर्न खोजेको थिइनँ। मिडियाले प्रमाण बिना न्युज हाल्नुहुन्न भनेर दिएकी थिएँ, तर सार्वजनिक गरिदिनुभएछ,' उनले भनेकी छन्।
तर, भोजराजको जुन च्यानलमा उनले यसो भनिन्, त्यही च्यानलले उनको कुराकानी राख्दै गर्दा त्यो दुर्व्यवहारको भिडियो सार्वजनिक गरिदियो। जबकि नेपाल प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताले पनि त्यसरी दुर्व्यवहारको भिडियो सार्वजनिक गर्ने छुट दिँदैन। आचारसंहिताको ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नं. ४ मा उल्लेख छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले विपत्ति वा शोकमा परेका, दुःख–पीडा भोगिरहका व्यक्ति वा उनका आफन्तजनमा थप पीडा पुग्ने गरी वा सावर्जनिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि विवरण, चित्र, संकेत लगायतका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नु हुँदैन।’
यतिमात्रै होइन, आचारसंहिताले त ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले समाजमा हिंसा, निराशा, घृणा, सन्त्रास र उत्तेजना फैलाउने किसिमका साथै हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, दुर्घटना जस्ता कारणबाट सिर्जित नग्न, क्षतविक्षत र बिभत्स दृश्य एवं तस्बिर सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन’ पनि भनेको छ।
तर, भोजराजका अधिकांश भिडियोले यो आचारसंहितालाई पालना गरेको छैन। बिभत्स र मृतकका तस्बिर उनले अपलोड गरेका धेरै भिडियोमा भेटिन्छ।
तपाईंलाई एक वर्षअघिको ‘दिदी भाइ काण्ड’ याद छ? नवलपरासीस्थित बर्दघाटका ऋषिराम उपाध्यायले १५ वर्षअघि अम्बिका पंगेनीसँग बिहे गरेका थिए। उनीहरुका एक छोरा थिए। ऋषि वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गएका बेला अम्बिकाले बुटवलको एक अस्पतालमा कार्यरत रेडियोलोजिस्ट किशोर आचार्यलाई ‘भाइ’ मानेर आफ्नै घरमा राखेकी हुन्छिन्। ऋषिका सासु–ससुरा र छिमेकी सबैलाई त्यही भनेकी हुन्छिन्। किशोरको बिहे गराएर बुहारी पनि त्यही घरमा भित्राएकी हुन्छिन्।
तर, गाउँमा उनीहरुको अवैध सम्बन्ध रहेको हल्ला चल्छ। अरुका परिवार चिहाउँदै हिँड्ने भोजराजको कानसम्म यो ठोक्किन्छ यो हल्ला। त्यसपछि अम्बिकाको श्रीमान् आत्तिएर घर मात्रै फर्किदैनन्, एयरपोर्टदेखि उनीमाथि इन्टरभ्यू लिने शृंखला सुरु हुन्छ। युट्युबरले यो मुद्दाले यतिसम्म चर्काए कि अम्बिकासँग श्रीमान् ऋषिको डिभोर्स मात्रै भएन, अम्बिका साँच्चिकै आफूले ‘भाइ’ भन्ने किशोरसँग भाग्न बाध्य भइन्। सुनिन्छ, उनीहरू अहिले भारत छन् तर यकिन कसैलाई थाहा छैन। तर, युट्युब जगतमा आज पनि भोजराजकै कारण यो ‘दिदी भाइ काण्ड’ जन्मिएको चर्चा हुने गर्छ।
शीर्षक : २८ वर्षे पुरुषले ४५ वर्षे विधुवा महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्दा बस्यो पेटमा ६ महिनाको गर्भ, दाङमा।
मे ७, २०२१ मा भोजराजकै च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोको शीर्षक हो यो। हालसम्म २ लाख २० हजार भन्दा बढीले हेरेको यो भिडियोमा भोजराजले आफू बलात्कृत भएको बताउने दाङकी एक महिलाको अन्तर्वार्ता लिएका छन्। न उनी पीडितको गोपनीयताप्रति संवेदनशील छन्, न पत्रकार आचारसंहिता। पीडितसँग भद्दा संवाद गर्दै भ्यूज कमाउनेतिर मात्रै उनको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। उनी ती पीडित महिलालाई सोध्छन्, ‘अनि, अहिले त तपाईंको पेटमा बिना बाउको बच्चा हुर्किरहेको छ रे नि! समाजले तथानाम गाली गरिरहेको छ, यो बच्चाको बाउ को हो?’
अनि, ती पीडित महिला बच्चाको बाउ इन्द्रे भण्डारी हो भन्दै जवाफ दिन्छिन्। त्यसपछि उनी लगातार प्रश्न गर्छन्, ‘कसरी सम्बन्ध बस्यो तपाईंहरुको?’, ‘रातको १२ बजे कसरी आयो?’, ‘ढोका लाउनुभएको थिएन?’, ‘ढोका खोलेपछि चोर–चोर भनेर चिच्याउनुपर्ने, चिच्याउनुभएन किन?’, ‘अनि तपाईसँग जर्बजस्ती गर्‍यो?’, ‘सहमतिमा गरेको भन्थ्यो त त्यसले त?’
यी प्रश्नहरुले नै अनुमान लाउन सकिन्छ, दाङका भोजराज थापा युट्युबमा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहन्छन्।
भोजराज प्रवृत्तिका युट्युबरले अहिले समाजलाई सिध्याउन खोजिरहेको विश्लेषण गर्छिन्, समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेती। ‘अहिले हामीकहाँ देखिएका केही युट्युबर(भोजराज प्रवृत्तिका) छन्, जसले समाजलाई सक्न खोजिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरुले समाजलाई धराशायी बनाउँदैछन्। परिवार सक्दैछन्। व्यक्तिगत सम्बन्ध सक्दैछन्। उनीहरू अनावश्यक विषयवस्तुलाई क्यामेरामा कैद गरेर समाजलाई सिध्याउनतिर लागिरहेका छन्।’
जब परिवारभित्र मिडिया घुस्न थाल्छन्, त्यसपछि परिवार ध्वस्त हुने उप्रेतीको विश्लेषण छ। ‘संसारमा सबैभन्दा सशक्त र शक्तिशाली संस्था भनेको परिवार नै हो। तर, जब पुँजीवाद त्यहाँभित्र पस्दै जान्छ, जब मिडिया त्यहाँभित्र घुस्न थाल्छ, तब परिवारमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पुँजीवादले कसरी परिवारलाई ध्वस्त बनाउँदैछ, अहिले न्यूज च्यानल भनिने युट्युबरहरुले परिवारलाई किन आफ्नो विषय बनाउँदैछन्, किन अरुको नीजि जीवनमा घुस्दैछन्, त्यो आजको महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। जब कुनै पनि घर या परिवारमा मिडिया पुग्छ भने त्यो ध्वस्त हुन थाल्छ। किनभने सम्बन्धमा आउने समस्या परिवारभित्र मात्रै हुँदा त्यो परिवारबीच नै बसेर सम्हालन सकिन्थ्यो। तर युट्युबरहरुले त परिवारका समस्या समाजमा मात्रै होइन, संसारभर फैलाइदिन थाले। दम्पतीहरुको डिभोर्ससम्म गराइदिन थाले। ’
अहिले केही युट्युबरको सबैभन्दा ठूलो व्यापार नै पारिवारिक द्वन्द्व या पारिवारिक विषय बनिरहेकोमा चिन्तित छिन्, समाजशास्त्री उप्रेती। ‘अहिले युट्युबको ट्रेन्डिङ हेर्ने हो भने त्यस्तै भिडियो मात्र भेटिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाज कता जाँदैछ? कस्ता विषयमा रुचि राख्दैछ? यसैले पनि स्पष्ट पार्छ। जहाँ परिवारमा द्वन्द्व छ, जहाँ परिवारमा अभाव छ, युट्युबरहरू हातमा एउटा क्यामेरा बोकेर खोजीखोजी त्यहाँ पुगिरहेका छन्। कसैको द्वन्द्वमाथि झन् द्वन्द्व थप्नु भनेको आगोमाथि घिउ थप्नु हो। परिवारका समस्या त परिवारभित्रै मिल्न सक्थ्यो। यहाँ त्यहाँको समाजले मिलाउन सक्थ्यो तर युट्युबरहरू यसरी घुसिरहेका छन् कि त्यसले मिल्ने होइन, झन् बिगार्ने माहोल सिर्जना गरिरहेको छ।’
अर्को गम्भीर कुरा के छ भने हामीकहाँ अहिले युट्युबरहरुले खोजीखोजी देखाइरहेको पारिवारिक द्वन्द्व, डिभोर्सका भिडियोले विदेशमा रहेका लाखौँलाख नेपालीमा मनोवैज्ञानिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। ‘उनीहरु तिनै भिडियोहरु हेरेर, नकरात्मक सोच्न बाध्य भइरहेका छन्। आफ्नै श्रीमान्/श्रीमतीप्रति शंका/उपशंका गरिरहेका छन्,’ समाजशास्त्री उप्रेती थप्छिन्, ‘परिवारमा अविश्वास झन् झन् बढिरहेको छ। त्यसैले युट्युबरहरू यसरी नै अघि बढिरहे भने अबको १० वर्षमा हाम्रो समाज कहाँ पुग्छ? यो निकै चिन्ताको विषय हो। अब त मैले कसैसँग बदला लिनु छ भने एउटा युट्युबरलाई बोलाएर उसको क्यामेराअघि मनपरि बोलिदिए पुग्ने भो। सोच्नुस् त, यो कति डरलाग्दो समय भयो!’
थप समाचार : युट्युबरको हस्तक्षेपले यसरी खलबलियो राउटे युवतीको जीवन
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियनका पदाधिकारीले भेट गरी युनियनको आसन्न नवौँ महाधिवशेनका बारेमा जानकारी गराएका छन्।
बल्खुमा गाडीको ठक्करबाट एक भारतीय नागरिकको मृत्यु
काठमाडौंको बल्खुमा गाडीको ठक्करबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-१४ बल्खु तरकारी बजार नजिक सडकमा बा१३च ६४१९ नंको गाडीको ठक्करबाट भारत महाराष्ट्र घर भएका योगिता बन्सुरको पाँच वर्षीय छोरा आयुष बन्सुरको आइतबार मृत्यु भएको हो।
मकवानपुरमा जन्ती बोकेको ट्याक्टर दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, २६ घाइते
मकवानपुरको वाग्मतीमा विवाहको जन्ती बोकेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने २६ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्।